IGAD oo war ka soo saartay arrimaha ay wado DF Soomaaliya, kuna bogaadisay.
MUQDISHO(P-TIMES) – War qoraaleed kasoo baxay Xaafiiska Urur gobaleedka IGAD u qaabilsan Soomaaliya iyo Badda Cas ayaa looga hadlay arrimaha kasocda deegaanada Galmudug ee ay hormuudka u tahay dawladda Faderaalka, gaar ahaana arrimaha dhismaha Galmudug mideysan oo ay dhinacyadan oo dhan raali iskaga yihiin.
Maxamed Cali Guyo oo ah Wakiilka gaarka ah ee Soomaaliya u qaabisan IGAD ayaa waxaa uu soo dhaweeyay dadaallada dib heshiisiinta loogu sameeynayo beelaha Galmudug,isla markaana waxaa ku ammaanay Galmudug sida wanaasagn ay howshata u socoto.
IGAD waxay soo dhaweysay dadaalada iyo waqtiga ay xildhibaanada baarlamaanka, Siyaasiinta, Madaxda dawladda Soomaaliya ee kasoo jeeda Galmudug ay galinayaan sidii lo qaban lahaa shir lagu turxaan bixinayo arrimaha u dhaxeeya Galmudug, iyadoo dadaalkaas uu yahay mid dhinacyadan oo dhan muhiim ah.
Beesha Caalamka ayay ku bogaadiyeen sida ay gacanta uga geysaneyso Arrimaha Galmudug,waxaana IGAD ay tilmaamtay inay ka go’an tahay taageerida Galmudug.
Sidoo kale Urur Goboleedka IGAD ayaa xusay inay doonayan in Doorashada dowlad Goboleedka Galmudug ay noqoto mid ku dhacda si xor,isla markaana maamulkaas uu yeesho Galmudug mid ah.
Ugu dambeyntii IGAD Warka ka soo baxay ayaa waxaa aan lagu xusin dadaallada dowladda Federaalka Soomaaliya ka wado deegaanada Galmudug,isla markaana ay ugu dib u heshiisiin dhab ah ugu sameyneyso beelaha dega Galmudug.
Dowladda Somalia oo dalka kusoo celisay muwaadiniin ku xayirnaa Pakistan
Qarax khasaare sababay ka dhacay Muqdisho & Taliye lala eegtay
C/rashiid Xidig oo dawcad ka gudbiyey Wakiilka Midowga Afrika ee Somalia